Tag: Ahịa Webinar | Martech Zone
Tag: Ahịa Webinar
Ndụmọdụ vidiyo ahịa sitere na Home Office
Tọzdee, Machị 26, 2020 Tuzdee, Machị 2, 2021 Douglas Karr
Na nsogbu ugbu a, ndị ọkachamara n'achụmnta ego na-achọpụta na ha nọpụrụ iche ma na-arụ ọrụ n'ụlọ, na-adabere na usoro vidiyo maka nzukọ, ịkpọ oku, na nzukọ ndị otu. Ugbu a, ana m ekewapụ onwe m iche maka izu na-esote ebe ọ bụ na ekpughere otu enyi m na onye nwalere nke ọma maka COVID-19, yabụ m kpebiri itinye ndụmọdụ ụfọdụ iji nyere gị aka ịkwalite vidiyo dị ka usoro nkwukọrịta gị. Ndụmọdụ vidiyo nke ụlọ ọrụ na Office nke ejighị n'aka nke akụ na ụba,
BrightTALK, nke na-ebipụta webinar benchmark data kemgbe 2010, nyochara ihe karịrị webinars 14,000, ozi ịntanetị nde 300, ndepụta na nkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana ngụkọta nke awa 1.2 nke itinye aka na afọ gara aga. Nkwupụta a kwa afọ na-enyere ndị na-ere ahịa B2B aka ịtụle ọrụ ha na nke ụlọ ọrụ ha ma hụ omume ndị na-eduga n'inwe ihe ịga nke ọma. Na 2017, ndị sonyere jiri nkezi nke 42 na-elele webinar ọ bụla, mmụba 27 na-abawanye kwa afọ
Dị Ọdịnaya nke entdị Ọdịnaya Na B2B Social Media Marketing
Kedu ụdị ọdịnaya a na-akwalite na mgbasa ozi mmekọrịta na-enye mmetụta dị ukwuu? O nwere ike iju gị anya. Buru n'uche na ndepụta a nke ụdị ọdịnaya abụghị ihe na - arụ ọrụ kacha mma - naanị nzaghachi nke ndị na - azụ B2B na ọdịnaya nwere mmetụta dị ukwuu mgbe ha lechara ya mgbe ejiri mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Site na mbu, lee ndepụta nke ụdị ọdịnaya kachasị emetụta yana nkọwa sitere na Eccolo Media: Nnyocha ọmụmụ - nkọwapụta zuru ezu
You maara na, na nkezi, ndị na-ere ahịa B2B jiri ụzọ aghụghọ 13 dị iche iche maka ụlọ ọrụ ha. Amaghị m banyere gị, mana nke ahụ na-enye m isi ọwụwa naanị na-eche banyere ya. Agbanyeghị, mgbe m chebara ya echiche, anyị na-enyere ndị ahịa anyị aka itinye ọtụtụ usoro ahụ kwa afọ na ọnụọgụgụ a na-arịgo naanị ka ndị na-ajụ ase na-emeju afọ. Dị ka ndị ahịa, anyị kwesịrị ibute ụzọ na ebe anyị ga-aga